Saika hatao sorona…? Ankizivavy 14 taona saika hamidy 30 tapitrisa Ar | NewsMada
Saika hatao sorona…? Ankizivavy 14 taona saika hamidy 30 tapitrisa Ar
Nidoboka vonjimaika am-ponja ao Antsirabe, ny asabotsy teo, ireo jiolahy efatra nivarotra ankizivavy 14 taona. Saika hamidy 30 tapitrisa Ar ity ankizivavikely ity…
Voasambotry ny zandary tao amin’ny kaominina Ankazomiriotra, distrikan’i Mandoto, ny alakamisy teo, ireo jiolahy efatra tompon’antoka tamina hala-jaza tany an-toerana. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, nahazo loharanom-baovao mialoha izy ireo fa misy jiolahy efatra manana ankizivavikely 14 taona hamidin’izy ireo ary eo am-pitadiavana mpividy mihitsy ry zalahy. Fantatra ka saika hamidin’izy ireo 30 tapitrisa Ar ity ankizivavikely 14 taona ity. Nametraka ny vela-pandrika rehetra ny zandary amin’ny ahafahana misambotra ireto jiolahy mpangala-jaza ireto ka mody nanaiky fa hividy ity ankizivavikely hamidy ity. Natao ny fifanarahana rehetra sy ny adivarotra ary ny toerana hanaovana ny fifampivarotana ka noraisim-potsiny ry zalahy niaraka tamin’ilay ankizivavikely. Nentina nanaovana fanadihadiana tao amin’ny biraon’ny zandary ireo jiolahy, saingy nihidy vava tsy nety niteny mihitsy ny ambadik’ity raharaha hala-jaza ity. Natolotra ny fampanoavana ao Antsirabe avy hatrany ireto mpangala-jaza ireto mialoha izany ka izao naiditra am-ponja izao.
Mitady ankizivavikely madio…
Nilaza kosa ity ankizivavikely ity, nandritra ny fanadihadian’ny zandary, fa nirahin’ny ray aman-dreniny hanatitra entana tamin’ny alalan’ny taksiborosy ka norebireben’ireo jiolahy tao anaty taksiborosy ka lasan’izy ireo. Manao tandrevaka ny ray aman-drenin’ilay ankizivavikely? Nampisotroin’ireo mpangala-jaza ranon-javatra ity ankizivavikely ity ka tsy tompon’ny tenany intsony taorian’izay, raha ny fanazavana voaray hatrany.
Ny asabotsy teo, nisy jiolahy iray hafa mpiray tendro amin’ireo jiolahy momba ity hala-jaza ity koa voasambotry ny zandary. Mbola ao anatin’ny fanadihadiana azy ny zandary ka aorian’izay ny hamantarana ny marina rehetra. Fantatra tamin’ny alalan’ny loharanom-baovao hafa fa nokasaina hamidy hanaovana sorona ity ankizivavikely ity satria misy mitady ankizivavikely madio mba hatao sorona amin’iny faritra iny. Manoloana izany, mitaintaina ny ankamaroan’ireo ray aman-dreny manan-janaka vavikely amin’izao fotoana izao.
Tsiahivina fa resaka tsaho momba ny hala-jaza ny nahatonga ireo andian’olona marobe nandoro fiara 4×4 an’ny fikambanana iray nahiahin’ny olona ho mpangala-jaza tao Antsahondra, Betafo Antsirabe, andro vitsivitsy lasa izay. Teo koa ilay mpandraharaha nahiahin’ny olona ho mpangala-jaza sy mpangalatra taolam-paty ao Betafo Antsirabe ka niafara tamin’ny fandrobana sy fandoran’ny olona ny tranon’ilay mpandraharaha.
Miteraka savorovoro eo amin’ny mponina amin’iny faritra iny, araka izany, ity resaka hala-jaza ity.